Fambolena zava-mahadomelina :: Rongony fito amby roapolo fototra saron’ny polisy • AoRaha
Fambolena zava-mahadomelina Rongony fito amby roapolo fototra saron’ny polisy
Nahatraran’ny polisy rongony fito amby roapolo fototra ny trano iray, teny Avarabohitra Itaosy. Nosamborina tamin’ny fotoana nidinan’ny mpitandro filaminana, teny an-toerana, afak’omaly, ny lehilahy roa tompon-trano sady tompon’ireo zava-mahadomelina ireo.
Niroso tamin’ny fisavana trano iray teny Avarabohitra Itaosy ny polisy avy ao amin’ny Sampan-draharaha misahana ny zava-mahadomelina (Stup) etsy Anosy, taorian’ny angom-baovao nataon’izy ireo. Tra-tehaka tao ny lehilahy roa tompon-trano.
“Niaiky izy roa lahy fa azy ireo ny rongony novolena. Natao tao anaty siny nasiana zezika ary notarafina amin’ny jiro sy tondrahana rano ireo rongony novolena. Telo volana, hoy izy ireo, ny fe-potoana hanirian’ny fototra iray dia efa azo ampiasaina”, araka ny fanampim-panazavan’ ny mpanao famotorana.
Fahafatesana mpanakanto vahiny Lavon’ny “coronavirus” i Manu Dibango, mpihira ny “Makossa”
Zavamaneno nentin-drazana :: Hivimbina ny rotsim-baliha i Linda Volahasiniaina